Mpamatsy milina mpampisara-baoritra mifangaro-masirasira mora vidy | YiZheng
Inona no mampisaraka ny Sieving Solid-fluid Separator?
Izy io dia fitaovana fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny tsy fahampian-tsiranoka amin'ny zezika akoho amam-borona. Izy io dia afaka manasaraka ny rano maloto sy fotaka amin'ny fakon'ny biby fiompy ho zezika organika misy zezika sy zezika voajanahary. Ny zezika biolojika ranoka dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana vokatra aorian'ny fanamasinana, ary ny zezika biolojika matanjaka dia azo ampiasaina amin'ny faritry ny tsy fisian'ny zezika izay afaka manatsara ny firafitry ny tany. Mandritra izany fotoana izany dia azo atao zezika zezika voajanahary koa izy io. Ny paompin-tsigara manohana dia ampiasaina handefasana ny rano zezika tany am-boalohany, ary ny akora matevina (zezika maina) dia esorina sy sarahina amin'ny alàlan'ny axis spiral apetraka ao amin'ny efijery, ary ny ranoka dia mikoriana mivoaka amin'ny fivoahana amin'ny sivana.
Ny firafitry ny sivana mihidy karazana fisarahana ranoka matevina
ny Mpisaraka amin'ny ranoka matevina mifangaro vita amin'ny sieve, winch spiral ary spiral spiral, izay vita amin'ny vy tsy metaly 304 sy alloy avo lenta aorian'ny fizarana manokana. Izy io dia misy fanoherana tsara harafesina ary fanoherana fanoherana. Manana 2-3 ny fampiakarana serivisy raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'izany.
Endri-javatra an'ny Separator matevina matevina mitanjozotra
Ny fiasan'ny mpampisaraka sivana sivana matevina dia feno sy kendrena. Ny famolavolana ny masinina iray manontolo dia manambatra ny rafitra paompy zezika, ny rafitra hovitrovitra, ny rafitra fampidirana ary ny rafitra fanosehana mandeha ho azy, izay manatsara ny fahaizan'ny fitsaboana sy ny vokan'ny fitsaboana.
1. Taranaka vaovao ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana fanariana fako.
2. Fitsaboana mahomby ny fako maloto avy amin'ny fiompiana sy ny fiompiana akoho amam-borona.
Tombony amin'ny fisintahana sivana matevina matevina
1.Izany dia ny asan'ny manasokajy sy manivana sombin-javatra lehibe aloha, ary manambatra asa marobe toy ny fandefasana, fanerena, tsy fahampian-drano ary fanesorana fasika hamahana ireo olan'ny fitaovana mihodina fako sy ny fiasan'ny rivotra
2.Ny tahan'ny fisarahana ny zavatra mitsingevana, mihantona ary ny antsanga amin'ny fako dia mihoatra ny 95%, ary ny atin'ny fako dia mihoatra ny 35%.
3.Izany dia misy fiasan-tsolika fanaraha-maso mandeha ho azy, izay mahavonjy mihoatra ny 50% ny fanjifana herinaratra noho ny fitaovana mitovy aminy, ny vidin'ny fandidiana ambany.
4.Ny ampahany amin'ny fitaovana mifandray amin'ny fitaovana fanodinana dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta ary ampitaina amin'ny pickling.
Fampisehoana horonan-tsary mampisaraka fisarahana ranoka matevina
Safidy maodelim-pifanarahana mivaingana misintona
Ireto ny masontsivana ifotony:
Teo aloha: Masinina fametahana zezika miorina
Manaraka: Tsipika famokarana zezika voajanahary